Xaflad casho sharaf iyo soo dhoweeyn ah oo Gothenburg loogu sameeyay macalinkii Qodxaalay Maxamed Faarax + Sawirro | Gool FM	Tuesday, February 9th, 2016	Home
Xaflad casho sharaf iyo soo dhoweeyn ah oo Gothenburg loogu sameeyay macalinkii Qodxaalay Maxamed Faarax + Sawirro
Published on December 2, 2012 by Maxamed Xaaji
(Gothenburg) 02 Dis 2012 Waxaa xalaytoole magaaladan Gothenburg ku qabsoomay xaflad lagusoo dhoweeynayay Maxamed Faarax Maxamed oo ka mid ah ragga haatan ka dhex muuqda kubadda cagta Soomaalida oo soo gaaray magaaladan Gothenburg.
Xafladda oo ay kasoo qaybgaleen maamulka labada kooxood ee Somalisk SK iyo Neutrala IF iyo qaar ka mid ah laacibiintooda ayaa waxaa soo abaabushay Sacdiyo Maxamed Furre (Sacdiyo Soomaali) oo ah fanaanad qaran oo ka tirsanayd kooxda Horseed ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo Micraaj.
Waxaana xafladda oo ku dhacaysay jawi saaxiibnimo iyo mid is barasho waxaa ka hadlay inta badan maamulka labada kooxood iyo marti sharaftii kale oo ay ka mid ahaayeen Cali Yare Gaani, Macalin Aadan Oor, Ibraahim Qalinle, Maxamed Xuseen (Qaaluu), Maxamed Diini, Macalin Faagte, Macalin Yoonis iyo Macalin Cumar.
Waxaana xafladda ka mahadceliyay Maxamed Faarax oo bahda isboortiga Gothenburg iyo guud ahaanba qurbaha ku boorriyay inay ku dadaalaan sidii ay saameyn wanaagsan ugu yeelan lahaayeen is walaashiga, midnimada iyo waxtarka guud. ”Been idiin sheegi maayee qabyaalladii Soomaaliya qurbaha ayaa loosoo safriyay” ayuu yiri Maxamed Faarax oo caddeeyay in gudaha dalka aysan dadku haatan xiise badan u qabin qabyaalad iyo qoqob balse uu la yaabay midda ka jirta qurbaha.
Xafladdan casho sharafta ah ayay sidoo kale maamulka labada kooxood ee Soomaalida ah ee ka dhisan magaaladan Gothenburg waxay ku gudoonsadeen inay sameeyaan iskaashi iyo iska warqab ka wanaagsan midka ay haatan sameeyaan iyagoo codsaday inay taageero isu muujiyaan marka ay midkood ciyaarayso iyadoo sanadkan ay kooxda Somaliska SK ay usoo baxday heerka 6-aad ee dalkan Sweden.
Ugu dambayntii ayaa gudoonka kooxda Somaliska SK Md Ibraahim Qaline wuxuu abaalmarin gudoonsiiyay Maxamed Faarax oo ahaan jiray kabtankii kooxda Qodxaalay oo uu markii dambana macalin u noqday isagoo sidoo kale haatan ah milkiilaha kooxda Savana oo ka ciyaarta heerka 2-aad ee dalka Soomaaliya.
Maxamed Faarax ayaa sidoo kale ka mid ahaa Junyarkii kooxda Horseed ee xoogga dalka oo uu kula guulaystay koobka da’yarta oo ay Horseed qaaday sanaddii 1984-kii.
Gool FM, Gothenburg
Wararka	Maxaa ka jira in Lionel Messi uu baabuurka ugu qaalisan ebid adduunka uu ku garaacay Cristiano Ronaldo!?+SAWIRRO
(Spain) 09 Feb 2016. Warar dhawaan gal ah ...	Messi oo maray qaliin lagu guulaystay (Imisa maalin ayuu maqnaan doonaa)!
(Barcelona) 09 Feb 2016 Goor dhaw ayaa la shaaciyay ...	Klopp oo ay ka go’antahay inuu kooxdiisa keeno weerar yahankaan!
(Liverpool) 09 Feb 2016 Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ...	Garoonka Chelsea bannaankiisa oo lagu iibiyay funaanado lagu aflagaadeynayo tababare Arsene Wenger iyo weeraryahan Harry Kane…(Maxaa laga yiri?)+SAWIRRO
(London) 09 Feb 2016. Naadiga Chelsea ayaa ...	Barcelona oo calaamadaysatay 2-difaac oo halis ah suuqa xaggaaga!
(Barcelona) 09 Feb 2016 Kooxda Barcelona ayaa doonaysa inay ...	Roberto Firmino oo ku guulaystay abaal marinta PFA ee bishii janaayo!
(Liverpool) 09 Feb 2016 Waxaa goordhaw lagu dhawaaqay laacibkii ...	SAWIRO: Premier League oo loo sameeyey LOGO cusub….
(lLondon) 09 Feb 2016. Premier League waxa ay ...	CADAYN: Faah faahinta heshiiskii David De Gea uu ugu biiray rabay Real Madrid oo la ogaaday!
(Manchester) 09 Feb 2016 Shabakada Football Leaks ayaa wali wada ...	”Soriano annaga ayuu noo nusan yahay” – Maareeyaha ciyaaraha Inter Milan
(Roma) 09 Feb 2016 - Maareeyaha ciyaaraha ee ...	Signjet Footbal Club oo magacaabatay tababare cusub…..(DAAWO SAWIRRO XUL AH)
(Muqdisho) 09 Feb 2016. Naadiga Signjet Footbal Club ...	GoolFM Mobile (USA)	About usContactsWaxaan NahayNagala Soo Xiriir	Copyright © Gool FM 2016. All Rights Reserved. Hosted By Afro